Uzodlala izifo uma ukhonze iziphuzo ezinoshukela
INTATHELI YESOLEZWE | August 27, 2019
NGESIKHATHI eqoqa amathini esiphuzo esibandayo ukuze aphinde asetshenziswe, uNksz Lebogang Lebeko washaqeka uma ebona isibalo asiphuzayo wabona ukuthi uzogcina esegula ngenxa yeziphuzo ezinoshukela.
UNksz Lebeko (33), osebenza kwesinye sezitolo, wabona ukuthi uphuza iziphuzo eziningi ezinokushukela ngesikhathi esiza owayefuna amathini kudoti wakhe.
Uthe umndeni wakhe ubuphuza isiphuzo esihlohlozayo esingu-20lt ngesonto. Uthe abadli lesi siphuzo singekho.
“Ngihlezi ngibona abathatha udoti. Ngibe sengikhetha ukubenzela izinto zibe lula ngokuthi ngibeke eceleni amabhodlela namathini ukuze bakuthathe kalula. Emuva kwesonto ngibe sengibona ukuthi cishe sino-2lt bakanemenayidi abangu-10 ebesibaphuza ezinsukwini eziyisikhombisa ngashaqeka,” kusho uNksz Lebeko.
Lo nina wezingane ezimbili uthe uthenga isiphuzo esihlohlozayo esiwu-2lt njalo ngosuku ukuze kuphuze umndeni wakhe.
Uthe ufaka nekani emphakweni wezingane wesikole wathi ubengazi ngengozi yokuwuphuza.
Ingozi yokuphuza unemenayidi njalo:
Iziphuzo ezinoshukela, ezihlohlozayo, nezinikeza amandla ziyingozi ngokuthi ungabulawa yisifo senhliziyo, enye inhlobo yesifo somdlavuza ngokusho kwabacwaningi abakhiphe umbiko wabo kwi-American Association’s Circulation.
Ngaphezu kwalokhu ukungaphuzi unemenayidi onoshukela bese uphuza okunye okuphuzwayo okunoshukela kwehlisa amathuba okuba ushone kodwa ukuphuza lezo ziphuzo ezinoshukela ofakwe kwaze kweqa nakho kuseyingozi ikakhulukazi kwabesifazane.
UNksz Boitumelo Witbooi ongumhlengikazi uxwayise abantu ukuba baqikelele futhi babheke ingozi abangabhekana nayo ngokuphuza kakhulu idrinki.
“Abantu abaningi abazi ukuthi yiziphi izingqinamba abangabhekana nazo ngokuphuza kakhulu unemenayidi. Sikhuluma ngezifo zenhliziyo, ukuphathwa yizinso, isifo sikashukela, ukukhuluphala ngokweqile, ukubola kwamazinyo ukukha nje phezulu,” kusho uNksz Witbooi.
Uthe: “Abantu bacabanga ukuthi bangaphuza noma yini uma benxaniwe. Abawaphuzi amanzi isikhathi esiningi baphuza ezihlohlozayo. Lokhu kubi kakhulu.”
UNksz Witbooi uthe uhulumeni kufanele angenelele ngoba ukuthuthwa kwamathini ukuze aphinde asetshenziswe kukuveza obala ukuthi uphuzwa kangakanani unemenayidi.
UNksz Lebeko uthe uyesaba ukuthi ukuphuza kakhulu unemenayidi kungafaka umndeni wakhe engozini.
“Umama wayengumuntu omkhulu ngokomzimba, nodadewethu kanjalo nezingane zakwethu. Ngangicabanga ukuthi ukuba mkhulu yinto ejwayelekile emndenini wami kodwa manje ngikholwa wukuthi ukuphuza kakhulu idrinki kwaba nomthelela. Sengehlisile ekuyiphuzeni ukuze ngigweme ukugula,” kusho uNksz Lebeko.
I-British Medical Journal isanda kuveza ukuthi ukuphuza ijusi engu-100ml kulikhuphula ngo-18% ithuba lokuba nesifo somdlavuza, * -22% wokuba sengozini yokuphathwa yisifo somdlavuza webele.
Ulwazi luthathwe kwi-Healthe news